Yusuf Garaad: March 2017
Doodihii JUS - Dhoollatuska Jawiil - Qeybta Tobnaad
Waa qeybta Tobnaad uguna dambeysa taxanaha Doodihii Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Dhuusa Marreeb iyo nawaaxigeeda markii aan ka soo dhammaannay waxaan u soo gudubnay Beled Weyne.
Xilli barqo ah ayaan u baxnay Jawiil oo ay dadka qaar u yaqaannaan kala bayr. Jawiil waa halka ay waddada Beled Weyne ka baxdaa ay ku kala leexato oo midina ay u gudubto Feerfeer iyo Ethiopia midda kalena ay aaddo Gobollada Dhexe iyo kuwa woqooyi iyo Bari ee Soomaaliya. Waana magaalada ay ka billaabatay waddada Soomaaliya ugu dheer ee abid laami la saaray. Waa waddada isku xirta Jawiil iyo Burco. Waxaa waddadaas dhistay oo Soomaaliya ugu deeqday Dowladda Shiinaha.
Banka Jawiil ayay ciidanku ku dhigeen Dhoollatuskii ugu weynaa ee aan aragnay usbuucii aan la joognay. Hub kasta oo uu haysto ciidanka qeybta 21aad ayaa horteenna lagu adeegsaday iyada oo madaafiicda Goobta, Taanigiyada, baabuurta qafilan ee ciidanka qaadda iyo ciidanka lugtu ay dhammaantood kaalimahooda buuxinayaan.
Badankeen waxaan saarnayn baabuur jiib ah iyo Baabuurta waaweyn ee militeriga. Waxaan raacay jeeb dusha ka furan. Waxaan nasiib u lahaa in uu ahaa gaariga Taliyaha dabridka dalbanayay. Xagga dambe ayaan tartiib u soconnaa iyada oo Taliyuhu arag iyo Radio uu adeegsanayo ayuu gaariga dushiisa ka bixinayaa awaamirta. Inkasta oo uu af Soomaali ku hadlayo waa ay adag tahay qof aan ciidankiisa ahayni in ay af garato.
Jawiil waa halka aan ku maqlay hubkii ugu cuslaa oo ay dhegeyheyga ku soo dhaca isaga oo laga ridayo meel aan aad iiga fogeyn. Allah mahaddii waxay noqotay markii dhegeheyga ugu dambeysay marka laga reebo 1990 galab aniga oo jooga Borame la riday qori la iigu sheegay in uu yahay lidka dayaaradaha nooca 37 mm. Wuxuu ahaa baaq ay shacabka magaaladu isla yaqaan micnihiisa. isla sannadkaas magaalada Burco mar ciidan ka goostay Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo ciidan iyaga eryaday uu dagaal ku dhex maray meel magaalada ka baxsan ayaan hugunka madaafiicda maqleynay annaga oo magaalada ku sugan.
Dhoolatuska Jawiil markii uu dhammaaday ayaa sidii Balanbal uu Taliyaha Gaasku na siiyay warbixin. Waxaan filayaa in Taliyaha Gaaska Beled Weyne oo ka tirsanaa Qeybta 21aad uu ahaa General Maxamed Aden oo markii dambe noqday Taliyaha Qeybta 21aad . General Maxamed Aden hadda waa Taliyaha Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Burdhiinle iyo Luuq Jeelow
Dhoolatuska Jawiil ka dib, waxaan tagnay Burdhiinle oo ah Buur dhagax ah oo uu webiga Shabeelle hoos maro oo xadka saaran. Ciidan halkaas difaac uga jira ayaan la kulannay.
Usbuuc ayaan ku jirnay daawashada dabrid, dhoollatus iyo xogwarran Qeybta 21aad ee Dhuusa Marreeb iyo saddexda Gaas ee hoos yimaada. Waa Gaaska Gelinsoor, Gaaska Balanbal iyo Gaaska Beled Weyne. Wax badan ayaan xog ogaal u noqonnay. Waan ku dal iyo dad barannay.
Inta aynaan safarkeenna soo geba-gebeyn, waxaa tagnay xerada Qaxootiga Luuq Jeelow oo ku ag taalla Beled Weyne. Waxaan indhaheenna ku soo aragnay xaaladda Qaxootiga ka yimid Ethiopia ee ku sugan xerada.
Ugu dambeyntii waxaa na soo macsalaameeyay Taliyaha Qeybta 21aad, General Morgan iyo saraakiisha qeybta.
Waxay naga kasbadeen in aan u qirno howsha adag ee ay hayaan iyo sida ay ugu diyaarsanaayeen daafaca dalka, waa sida ay annaga noogu muuqatay.
Waxaa kale oo aan aad uga mahadcelinnay soo dhoweynta iyo xogta ay nala wadaageen.
Qormadan markii aan diyaarinayay 2016 ayaa aniga oo jooga New York aan email kula xiriiray General Morgan oo markaa ku sugnaa Garowe. Dhowr su’aalood ayaan weydiiyay oo ku saabsan barnaamijkii uu horseedka ka ahaa ee Mataaneynta Qalinka iyo Qoriga.
Ujeeddada uu ka lahaa wuxuu mar kale iigu fasiray in isaga iyo saraakiil ay isku ra’yi yihiin ay u arkayeen in Qalinku uu hoggaamiyo Siyaasadda, Qoriguna uu yahay midka daafaca qalinka. Sidaa darteed aanay kala maarmin ee ay tahay in ay iskaashadaan.
Wuxuu ii sheegay in markii uu ra’yigani curtay uu ka ansixiyay Madaxweyne Maxamed Siyaad iyo General Maxamed Cali Samatar.
Saxan, saxan ku gud
Muddo ka dib, waxay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ku martiqaadday saraakiisha Qeybta 21aad in ay toddobaad u soo martiyaan Jaamacadda.
General Morgan ayaa hoggaaminayay saraakiisha noogu yimid Xarunta Kulliyadaha Gahayr ee Muqdisho ayaga oo ka jawaabamaya Martiqaadka Jaamacadda.
Guryaha ardayda Gahayr ayaan dejinnay saraakiisha. Raashin waxaan ka siinnay makhaayadda ay ardaydu ka cunto.
Maaddaama aan markaas ahaa Guddoomiyaha Ardayda Kulliyadaha Gahayr, aniga ayaa mas’uul ka ahaa dejinta iyo ka warqabka hoyga saraakiisha.
Waxaan maalinba mid geynay ugana warrannay Kulliyadaha Jaamacadda iyo muhiimadda ay mid kastaa dalka ugu fadhido.
Posted by Yusuf Garaad at 05:26:00
Ku Mahadsanid 3 Milyan oo Akhris
Saaxiibbadeey saxaafadda bulshada waxaan ugu mahadcelinayaa in ay in ka badan 3,000,000 (saddex milyan) oo jeer ay akhristeen qormooyinka blog-eyga.
Waxaan u arkaa qaddarin iyo kalsooni. Anigana waxay i saareysaa mas’uuliyad ay tahay in aan ku dadaalo in qoraalladeyda wax uun laga kororsado.
Posted by Yusuf Garaad at 14:48:00
Doodihii JUS - Qeybta Sagaalaad - Balanbal iyo Gelinsoor
Xaaji Maxamed Axmed Liibaan
Intii aan ku jirany booqashada Qeybta 21aad ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxaan ku soconnay jadwal buuxa oo subax iyo galab aan safar u nahay marba gaas, marba guuto, marba xero ciidan ama meelo kale. Habeennada qaarna waxaa riwaayad ama goos goos murti xambaarsan nagu madaddaalin jiray kooxda fannaaniinta Ciidanka.
Subax waxaa nalaku sharfay in aan saraakiil, saraakiil-xigeen iyo askar aan u tolno derejooyin hore loogu ansixiyay laakiin aanay weli ku lebbisan.
Waxay ahayd xero ku taalla dhanka koofureed ee magaalada Dhuusa Marreeb oo laamiga aan ka fogeyn.
Waa markii iigu horreysay ee aan garaaddo u tolo xubin ka tirsan Xoogga Dalka Soomaaliyeed. Sharaf ayaan dareemaa mar kasta oo aan soo xusuusto. Waxay ahayd markii iigu dambeysay.
Golaha Hanuuninta Dadweynaha ee Magaalada Dhuusa Marreeb ayaa waxaa soo dhoweyn noogu sameeyay dadweynaha magaalada oo ay horkacayeen Guddoomiyaha Gobolka Galguduud oo aan u maleynayo in uu ahaa mas'uul lagu naaneysi jiray "I Say" laakiin ku caan ah Bankiga oo berigii dambe uu ka mid noqday Madaxdiisa.
Dadweynihii galabtaas na soo dhoweeyay iyo hadalladii halkaas la isku weydaarsaday waxaa ka mid ahaa gabay uu tiriyay Xaaji Maxamed Axmed Liibaan oo ku magac dheer Axyaa Waddani. Waa weriye Cag-ma-dhige awoowgiis. Wuxuu halkaa ku mariyay mid ka mid ah gabayadii waddaniga ahaa ee uu caanka ku ahaa.
Waxaan maalin qaadannay baabuurta waaweyn ee militeriga waxaanna tagnay Gelinsoor. Waxaa naloo geeyay laba beelood oo degaankaas dagaal ka dhexeeyay in aan midkood dhegeysanno cabashadooda lana hadalno oo aan isku dayno in aan nabad raadinta ka mid noqonno.
Qorshuhu ma noqon sidii uu Taliyaha Qeybtu ugu tala galay ama aan annagu rajeyneynay. Af gobaadsi ay nagu soo dhoweeyeen ka dib, si adag ayay ula garrameen General Morgan. Nin ka mid ahaa Odayaasha beesha aan u tagnay oo aan u maleynayo in ay ka soo jeedeen Cadaado, wuxuu yiri niman baan is haynaa oo dhiig naga galay. Nimankaas ayayna xaajo ka falantaa ee dhallinyaradaan u badan Iskuulleyda ee aad Xamar ka keentay col iyo nabad midna nooma hayaan. Ragga aan is hayno waad taqaan ee goobta soo fariisi ama nagu kala wada.
Ma wada xusuusto erayadii la is weydaarsaday oo dhan laakiin wadahadalka nuxurkiisu sidaas ayuu ahaa. Annaga oo aan wax guul ah ka soo hoyn ayaan habeenkii u soo hoyannay Taliska Qeybta 21aad. Waxaan u maleynayaa in markii aan Dhuusa Marreeb ku soo laabannay uu General Morgan uu noo sheegay in ujeeddadiisu ay ahayd in aan si toos ah u arago xaaladda amniga gudaha.
Labadii beelood ee degaankaas isku dilayay uma maleynayo in ay Dowladdu ku guuleysatay in nabad laga dhex dhaliyo.
Goobaha aan tagnay waxaa ka mid ahayd Balanbal. Meel ka sokeysa oo bannaan caws ka baxayo ayay ciidanku ku sameeyeen dabrid ay ka qeyb qaateen ciidammada qeybahooda kala duwan.
Waxay ahayd khibraddii iigu horreysay iiguna dambeysay ee agteyda laga rido qoriga lidka Taangiga ee Bazooka ama Seven loo yaqaan. Nasiib wanaag waxay ahayd markii shanqartiisa iigu dambeysay.
General Morgan iyo qaar ka mid ah xubnaha wafdiga Jaamacaddu waxay dabridka ka daawanayeen geed Garas ah oo dushiisa leh jaranjar lagu fuulo dushiisuna ay goglan tahay.
Dabridku markii uu dhammaaday waxaa Taliyaha Gaasku uu na siiyay warbixin tifatiran. Waxyaabaha oo nooga warramay waxaa ka mid ahaa tirada ciidanka ka qeyb qaadatay dabridka, rasaasta la riday noocyadeeda iyo tiradeeda, shidaalka baxay inta uu le’eg yahay, cid wax ku noqtay cayaarsiiskan militeri in ay jirto iyo in kale. Dabcan halkaas waxaan ka qiyaas qaadannay kharashka ku baxay howshaas wakhtiga kooban socotay.
Mar kasta oo aan jiidda soohdinta joogno waxaan la cunteyn jirnay ciidanka goobta uga jira difaaca, marka aan Taliska joognana waxaan ku miis ahayn saraakiisha.
Dhuusa Marreeb inta aynaan ka soo bixin cayaar saaxiibtinnimo oo kubbadda koleyga ah ayay ciidanka iyo Jaamacaddu ay ku yeesheen garoonka Taliska. Waxay ii ahayd markii u horreysay ee aan kubbad la cayaaro saraakiil miiran oo uu ku jiro Sarreeye Guuto kaas oo ahaa Taliyaha Qeybta 21aad General Morgan.
Halkaas waxaan ku soo gebagebeynay booqashada Xarunta Taliska Qeybta 21aad iyo laba gaas oo ka tirsan oo ay Taliyayaal u ahaayeen Gacma-gooye iyo Cabdullaahi Axmed Jaamac, Ilka-jiir, oo 1990 aan isugu nimid Berbera isaga oo ah Taliyaha Qeybta 26aad ee Hargeysa, haddana ah Wasiirka Garsoorka ee Dowladda Federaalka.
Waxaan subixii dambe u amba-baxnay Beled Weyne si aan u booqanno Gaas kale oo isaguna ka tirsan Qeybta 21aad ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed. Galabnimadaas Waxaan ku billownay cayaar kubbadda koleyga ah oo labada dhinac oo nagu dhex martay Garoonka Degmada ee rayidku adeegsado.
Saraakiisha u cayaarayay dhinaca Ciidanka waxaan ka xusuustaa General Morgan iyo General Mukhtaar oo hadda ah Taliye ku Xigeenka booliiska Soomaaliyeed, laakiin berigaas ahaa Sarkaal Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Posted by Yusuf Garaad at 05:49:00
Doodihii JUS - Qeybta Siddeedaad - Laan Waaleey
Taallada Daljirka Dahsoon, Muqdisho
Annaga oo ka kooban Macallimiin iyo Arday ka socda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo u marti ah Taliska 21aad ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed, ayaa subax naloo qaaday Laan Waaleey oo ah meel dhinaca soohdinta uga beegan magaalada Gaalkacyo.
Waa dhul dhagax ah. Aad u cabsi badan. Baabuurta meel fog ayaan uga soo degnay. Dhufeys ayaan galnay ah sida dhabbe si aan safarkeenna u sii wadanno annaga oo lugeyneyna. Dhufeyska gabbaadka ah marka aad mareyso madaxaaga oo keliya ayaa muuqda haddii aad gaaban tahayna laguumaba jeedo.
Waxaan u tagnay ciidan uu madax u yahay Carrabeey nin la yiraahdo. Wuxuu ahaa nin aad loo ammaanay dagaal-aqoonta iyo geesinnimadiisa. Laakiin markii uu su’aalaha ka jawaabayay iyo xataa markii uu saraakiisha ka sarreysa la hadlayay aan la yaabay anshaxiisa ciidan sida uu iila liitay. Hadallo adadag, qaarkood qallafsan yihiin amaba qadaf la dhihi karo ayuu siduu doono u tuurayay. Waxaan iska qiyaasay in xeradii Xalane ee nalaku soo tababbaray ee Macallin iyo Taliye kaliya la adeegsan karay ay ka duwan tahay goobtan oo iyadu ah xaalad dagaal.
Waxay noo tilmaameen oo aan u jeednay goobta ay ku jiraan ciidan Ethiopian ah oo ay is hor fadhiyeen. Waxay na tuseen taangi gubtay oo labada ciidan dhex yaalla. Waxay noo sheegeen maalintii taangigaa la gubay oo dhowr sano laga joogo ilaa iyo hadda in aanay jirin labada dhinac mid dul istaagay ama dul istaagi kara.
Ma jecli in aan barteyda qabiil ku xuso, laakiin waxay ila tahay in ay waajib tahay in aan sheego askari madaxeyga ka go'i waayay. Wuxuu ku jiray godka ugu horreeya. Waxaa naloo sheegay dhowr sano in uu godkaas difaac uga jiray oo jiif iyo shaqaba uu godkaasi u ahaa. Daljirahaasi wuxuu ahaa Soomaalida ay dadka qaar ku aflagaaddoodaan ee Jareer Weyne.
Asikarigaas iyo kuwa la midka ah, ee Soomaalida kale ee iyagu howlmaalmeedkooda ku mashquulsan, cid ka warheysa ama u ogina aanay jirin, ayagu ku jira khatar maalin iyo habeenba si ay inta kale u daafacaan ayaan u aqaan Daljirka Dahsoon.
Posted by Yusuf Garaad at 13:17:00
Doodihii JUS - Dhoollatuska Jawiil - Qeybta Tobnaa...
Doodihii JUS - Qeybta Sagaalaad - Balanbal iyo Gel...
Doodihii JUS Qeybta Toddobaad - Mataaneynta Qalink...
Doodihii JUS Qeybta Lixaad - Mataaneynta Qalinka i...
Doodaha Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed - Qeybta S...
Yabooh, Qofna Qado uma Gooyo - Socdaalkeyga Beydha...